Ụlọ ọrụ OEM n'ogbe kacha ọhụrụ ebipụtara Shorts Sleeve Cotton Black Tshirts ndị na-emepụta na ndị na-ebubata | Yiwan
Ndị nwoke na-acha odo odo na-acha odo odo gbatịrị nnukwu ho...
Aha ihe Tshirts ojii ojii kacha ọhụrụ arụpụtara OEM Ihe mejupụtara Owu
Oge nlele 7-9 ụbọchị ọrụ mgbe nkwenye niile nkọwa MOQ 100pcs kwa style otu agba
na ihe onwunwe ngwa ngwa mbata. mechiri ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen na Guangzhou nke dị mfe na ngwa ngwa maka mbupu.
With ákwà na-enyocha igwe na igwe na-ebu ụzọ emechi iji dobe ákwà dị mma maka ime ka ọ ghara imebi akwa ákwà.
Advanced igwe na ọkachamara ọkachamara QC ngalaba maka nlezianya akara àgwà na zuru okè ngwaahịa.
3.Skilled ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-eme ka usoro na-aga nke ọma.
4.Professional ndị ọrịa na-ere ahịa maka nkwurịta okwu nke ọma.
5.Custom ọrụ gụnyere mbipụta, embroidery, embossing, chenille...ect
Nke gara aga: OEM Cozy Digital Printing Crew Neck Navy Sweatshirts
OEM factory uwe elu
tshirts owu e biri ebi
Omuma Raglan ogologo aka uwe ire ọkụ owu Jersey ...
Omenala ndị ikom Tee Cotton Jersey Slim Fit T ...
Ihe nhụsianya nke ákwà ga-eleba anya Ⅰ Nyocha ákwà bụ nzọụkwụ dị oké mkpa mgbe a na-emepụta uwe, yana ihe dị mkpa maka QC. N'okpuru ebe a bụ nkọwa ntụpọ 3 akwa iji lelee anya n'oge nyocha akwa. 1.HORIZONTAL LINES A na-akọwa ntụpọ ákwà a site na ahịrị na-adịghị mma nke na-esi n'akụkụ gaa na ...
2021.12.06 Uwe elu anyị kachasị ọhụrụ pụtara, nke ejiri akwa neoprene dị nro mee ya, nwere ọrụ akọrọ, dị mma na nke dị fechaa, dị mma maka eyi. N'agbanyeghị maka iyi ihe kpatara ya, dịkwa mma maka ịgba ọsọ n'èzí, badminton, ping-pong, ect. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka oge mgbụsị akwụkwọ. nnukwu kangaroo poc...
4th, Nov, 2021 Black Friday dị nso, ị dịla njikere maka ire ọkụ na ihe ịtụnanya? N'ihi ọnọdụ Covid-19 na iche iche, ọtụtụ ndị enweghị ike ịpụ n'èzí maka akụrụngwa, yabụ, nkwukọrịta n'ịntanetị dị oke mkpa na ngwa ngwa maka ndị na-enweghị ike izute ibe ha ihu na ihu. Dị ka na ...
Usoro sitere na izu Ejiji Milan 2021.10.14 Kemgbe izu Ejiji Milan na Septemba 2021 bịara na njedebe, Ugbu a, ka anyị chịkọta usoro 9 kachasị amasị na ihe ngosi ejiji nke izu a. 2000s Ejiji nke narị afọ iri na ihe niile na-emegide ya bụ mkpali n'azụ Dolce & Gabba ...
Dị ka anyị niile maara na coal bụ ike dị oké mkpa maka ọkụ eletrik, ma ebe ọ bụ na ọnụ ahịa coal na-arị elu nke ukwuu, ọ na-emetụta ike ọkụ eletrik. Iji mee nguzozi n'etiti ikuku carbon, nchebe gburugburu ebe obibi na ikike mmepụta, ikekwe ị achọpụtala na "d ...